DEGDEG: Wasiirka amniga Dowladda Kenya oo Nairobi ku geeriyooday – Balcad.com Teyteyleey
DEGDEG: Wasiirka amniga Dowladda Kenya oo Nairobi ku geeriyooday
Wasiirka amniga Dowladda Kenya Joseph Nkaissery ayaa goor dhow ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi, halkaasi oo maalmihii ugu dabiibayay xaaladiisa caafimaad.
Isbitaalka Karen ee uu ku geeriyooday Joseph Nkaissery waxaa haatan ku sii qulqulaya madax ka tirsan Dowladda Kenya, eheladiisa iyo qaraabadii Wasiirka, waxayna Dowladdu shaacisay in loo sameynayo aas Qaran saacadaha soo socda.
Geerida Wasiirka amniga Dowladda Kenya ayaa la sheegayaa inay timid kaddib markii muddo ka badan laba bilood uu la xanuunsanayay cudurka Kansarka iyo cudurro kale oo gudaha ah, waxayna dhaqaatiirtu sheegeen inay la tacaalayeen sidii loo daweyn lahaa.
Dhinaca kale Joseph Nkaissery ayaa ka mid ahaa Wasiirada ugu dhow Madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta, isagoona sanadihii ugu dambeeyay howlihiisa ay u badnaayeen la dagaalanka xagjirka argagixisada ah ee dalkaasi ka wada dagaalada iyo weerarada joogtada noqday.
The post DEGDEG: Wasiirka amniga Dowladda Kenya oo Nairobi ku geeriyooday appeared first on Ilwareed Online.
Madaxweynaha oo furaya kalfadhiga 2aad ee Baarlamaanka
Ciidamada Ammiga Soomaaliland oo xiray Wariye ka yimid magaalada Muqdisho